တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: အိမ်ရှေ့ကဆေးရုံမှာ ...
Posted by မေဓာဝီ at 4:04 AM
yes.. do as I say, don't do as I do ^_^ ha ha.. nice one.
အဲဒီလေဒီကြီးက ဆင်းရဲရှာတယ်ထင်ပါရဲ့.. အပြင်ဆေးခန်းမှာတော့ မတက်ပဲနဲ့.. အခုတော့ ရေးခံထိရှာပြီ... အမကလဲ မြင်တတ်ပါ့ဗျာ.. ဟဲဟဲ
10/29/2006 4:54 PM
အင်း .. အဲဒီလေဒီကြီးက နားလား၊ နှာခေါင်းလား၊ လည်ချောင်းလားမသိဘူး အဲဒါ ခွဲစိတ်ကုသခံဖို့ ဒီဆေးရုံကိုရောက်လာရရှာတာပါ။
ကျမက တနေ့တနေ့ အိမ်ထဲမှာပဲနေနေရတော့ အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပဲ ကြည့်မိတဲ့အတွက် မြင်သမျှလေးတွေ ရေးလိုက်ရတာပါ။
မေဓါ ဘယ်မှာနေလဲ သိပြီဗျ။ (ဟောလီးဒေးက မွတ်စလင် ဘဲကင် ကောင်းတယ်၊ အနားက လက်ဘက်ရည်ဆိုင်ကလဲ နာမည်ကြီး။ ရှလွတ်။)
I'm missing the days i used to sit at Modern teashop and the one next to Shin Par Guu clinic with my friends after reading ur post. :P
10/30/2006 10:13 PM
10/31/2006 6:09 AM
ဒီအတိုင်းပါပဲလား၊ စိတ်ဓါတ် အရမ်းကျပါတယ်။
နိုင်ငံကို ဘာမှ အကျိုးမပြုတဲ့ အပြင် အလကား ရတာတွေကို တခုမှမကျန်အောင် သုံးပစ်ဖြုန်းပစ်တာ ရှက်ဖွယ်လိလိပါ။
စကားမစပ် မမေရေ ... မမေနဲ့ ကျွန်မတို့အိမ်က နီးနီးလေး။ ရန်ကုန်ပြန်ရောက်ရင် လာခဲ့ဦးမယ်။ မော်ဒန်က ပူ၇ီနဲ့ ဆနွင်းမကင်း လိုက်ကျွေးရမယ်နော် :D
11/05/2006 4:57 AM
သြော် မမေရာ... ကိုယ် ကုသိုလ်နဲ့ ကိုယ်လာကြတာပဲလေ... ကျွန်တော်လည်း လိုက်ရှာနေတာ မောင့်မဟေသီတစ်ပါးလောက် လိုချင်လို့လေ... အမေ အဆက်တွေ ရှိရင်လည်း ပြောအုံနော် အဟိ...
မှားသွားလို့ အမေ ဟုတ်ဘူး မမေ အဆက်တွေနော်
မမေ “အသွားမတော်တလှမ်း” ဆိုတဲ့ စကားပုံကို “အသွားမတော် မမေရှေ့” လို့ပြောင်းရတော့မယ်။ ပထမတစ်ခါ မင်းသိင်္ခ ထိပြီးတော့ ခု ဒုတိယ “ဘော်ကဒို” ထိသွားတာပေါ့။ ဟိ မမေရှေ့ အနေအထိုင်ဆင်ခြင်မှပဲ၊ မတော် ဘလော့ခ်ထဲ ထည့်ရေးနေမှ....
1/21/2007 6:25 AM